Ndizvo chaizvoizvo zvose zvisingabhadhari?
Sei ndichifanira kunyora?
Ndingadzidza sei pasina zviziviso?
Ndingabatsira sei chirongwa chako?
Inotora nguva yakawanda sei kudzidza kudzidzira kuverenga?
Mumwe anoyera sei chiratidzo “mazwi paminiti” (WPM)?
Chii chandinofanira kushandisa TypingStudy.com?
Pandinotanga chidzidzo, purogiramu inoratidza kuti ndinofanira kudhinda Shift key kunyanya tsamba yakakumbirwa (iIi Shift tsamba). Nei zvakadaro?
Ndiani TypingStudy for?
Is TypingStudy yakakodzera kuvanhu vane dyslexia here?
1) Kana iwe ukanyora, iwe uchange uine ruzivo rwekufambira mberi pamwe chete nenhoroondo yekufambira mberi.
2) Unogona kudzidza pasina zviziviso kuburikidza nekupa mupiro muduku.
Mushure mokupa zvipo zviduku pane iwe, tichabvisa zviziviso kubva kubhuku rako. Ndapota ivai nemoyo murefu, kunyange zvakadaro, nokuti iyi inzira yekushandisa.
Iwe unogona kubatsira - 1) kunyora zvido pamusoro pezvaunoda uye zvisingadi
2) kunyora pamusoro pemafungiro ako nezvekuvandudza ruzivo rwekudzidza (uye chero chimwe chinhu, zvechokwadi)
3) kuudza shamwari dzako pamusoro pedu (kugovera webhusaiti yedu pahutano hwemagariro evanhu, kubatana nesu pa https://www.facebook.com/TouchTypingStudy)
Kuwanda kwenguva inodiwa kuti udzidze kubata-chinyorwa zvakanaka kunobva kwauri. Zvakakosha kugara uchiita. Nokuda kwemigumisiro yakanaka, tinokukurudzira kuti uite zvidzidzo chimwechete pazuva.
Yeuka, kuziva kuti tsamba dzose ndezvipi hazvirevi kuti iwe wakagadzirira kukurumidza kuverenga. Zvigunwe zvako zvinoda kukudziridza zvakakodzera kufamba kwemaitiro kana izvo zvinonzi “musimba kufamba mhemberero” yekuti imwe kiyi chaiyo inogona kukwanisa kuisa pasina kufunga pamusoro peyiyi kana kutarisa keyboard. Mafambiro ega anongowanikwa kuburikidza nekudzokorora kwakawanda. Yeuka - kungoita chete kunogadzira zvakakwana - hapana chimwe chinhu!
Kuti uone WPM, purogiramu inoratidza mazita akawanda awakanyora paminiti: 1 shoko = mabhii mashanu, kusanganisira nzvimbo uye zviratidzo zvepumbedzi.
Kubva kune rumwe rutivi rweumhizha, unoda chete Indaneti. Zvisinei, iwe unoda zvakare kukurudzira uye chido chekushanda pakuvandudza hutano hwako hwekubata.
Ndapota onai kuti Caps Lock haisi paunotanga kuisa. Ndiko apo Caps Lock iri pane iyo purogiramu inokukumbira kuti uomirire Shift key uye tsamba inobatanidzwa, pamwe chete.
TypingStudy ndeyevanhu vose vanoda kuwedzera unhu hwake hwekubata kuverenga. Kugunzva kuverenga ndiko unyanzvi hunoita kuti munhu afunge asi asina kutarisa khibhodi kuti awane yakakodzera.
Hongu, Typing Study yakakodzera vanhu vane dyslexia zvakare. Nehutano hwekubata, mumwe munhu ane dyslexia ane ruzivo rwakasiyana pane mumwe munhu asina unyanzvi hwekubata kutora. (Sezvo vamwe vanhu vane dyslexia vane dambudziko nemashoko akanyorwa nemaoko, magwaro ekunyora achavabatsira zvikuru, kubva kumhanho uye kuverenga.) Uye zvechokwadi zvinobatsira kuva nemashoko pamakombiyuta, nokuti ipapo munhu anogona kuita tsvete !